Iindaba-Kuqhubeka ntoni nge-iPhone12 MagSafe yokutshaja okungenazingcingo
Kuqhubeka ntoni nge-iPhone12 MagSafe yokutshaja ngaphandle kwamacingo
Ukusukela nge-iPhone 8 ngo-2017, iApple yongeze umsebenzi wokutshaja ngaphandle kwamacingo kuzo zonke iimodeli ze-iPhone, ezifanayo nendlela yokutshaja engenazingcingo kwezinye iifowuni eziphathwayo, kwaye iqala ukutshaja xa ibekwe kwitshaja engenazingcingo. U-Apple unethemba malunga nomsebenzi wokutshaja ngaphandle kwamacingo, kodwa ngokunyanisekileyo wathi ukutshaja ngaphandle kwamacingo kuxhomekeke kulungelelwaniso lwekhoyili yokuhambisa kunye nekhoyili yomamkeli. Itshaja zemveli ezingenazingcingo azinakufezekisa ezona ziphumo zibalaseleyo xa zibekwe ecaleni. Ukuba zibekwe ngokungachanekanga, ukusebenza ngokutshaja ngaphandle kwamacingo kuya kuncitshiswa kwaye umbane awuyi kunyuka. , Ukutshaja kancinci, ukufudumeza kakhulu, njl., Kuthintela ukukhula kokutshaja ngaphandle kwamacingo kunye nokuzisa amava amabi.
Ukuqala koonobangela, iApple yazisa itekhnoloji entsha yokutshaja iMagSafe ukusombulula amava amabi okutshaja kwendabuko ngaphandle kwamacingo. Ifowuni ye-12 yefowuni ephathekayo, izixhobo ezincedisayo kunye netshaja zonke zixhotyiswe ngezinto zeMagSafe ukuze kufezekiswe ukubekwa okuzenzekelayo kunye nokulungelelaniswa. I-iPhone 12, Zombini i-iPhone12 mini kunye ne-iPhone12 Pro zixhotyiswe ngetekhnoloji entsha yokutshaja kweMagSafe.
Njengoko kunokubonwa kwimbono ye-iPhone12, iMagSafe yenkqubo yokutshaja yamagnetic system, ikhoyili eyahlukileyo eyahlukileyo yokumelana namandla amakhulu okufumana, ukubamba ukuhamba ngombane ngepaneli ye-nanocrystalline, kunye nokwamkela umaleko ophuculweyo wokukhusela ukuze ufumane ngokukhuselekileyo ukutshaja ngaphandle kwamacingo. Uluhlu lweemagnethi ezixineneyo zidityanisiwe kumda wekhoyili yokufumana ngaphandle kwamacingo ukuqonda ulungelelwaniso oluzenzekelayo kunye nokufakwa kwintengiso kunye nezinye izixhobo zemagnethi, ngaloo ndlela kuphuculwa ukusebenza kokufumana ngaphandle kwamacingo. Ukuxhotyiswa ngemagnetometer enobuntununtunu obuphezulu, iphendula kwangoko kutshintsho kumandla ombane wentsimi, evumela i-iPhone12 ukuba ichonge ngokukhawuleza izixhobo zemagnethi kwaye ilungiselele ukutshaja ngaphandle kwamacingo.
Kuba i-iPhone 8 ixhotyiswe nge-7.5W yokutshaja ngaphandle kwamacingo, amandla okutshaja ngaphandle kwamacingo e-iPhones angaphambili amile kwi-7.5W. Itekhnoloji yokutshaja kwaMagSafe iphinda-phinda ukusebenza kokutshaja ngaphandle kwamacingo, ngamandla amakhulu e-15W.
Ukongeza kwiMagSafe yokutshaja ngemagnethi, lonke uthotho lwe-iPhone12 lusakuxhasa ukutshaja ngaphandle kwamacingo kwe-Qi kuluhlu olubanzi lokuguquguquka, ngamandla ukuya kuthi ga kwi-7.5W. Abasebenzisi abafuna isantya sokutshaja ngokukhawuleza banokusebenzisa itshaja yentsimbi yeMagSafe, kwaye iitshaja ezingenazingcingo zeQi ezisasazwa ngokubanzi kwintengiso zinokuqhubeka nokusetyenziswa.